Imaarada Islaamiga ee Afqaanistaan oo faafaahin ka bixisay weeraro qorsheysan oo ay ka fulisay dalkaas. – Radio Alfurqaan | Xarunta Wararka Sugan
Imaarada Islaamiga ee Afqaanistaan oo faafaahin ka bixisay weeraro qorsheysan oo ay ka fulisay dalkaas.
On Mar 10, 2018 186 0
Afhayeenka Imaarada islaamiga ee Afqaanistaan Dabiixullaahil Mujaahid oo soo saaray war saxaafadeed kooban ayaa faafaahin ka bixiyay howlgallo qorsheysan oo ciidamada mujaahidiinta ka fuliyeen gobolka Takhaar ee dalkaas.
Afhayeenka ayaa sheegay in ciidamada mujaahidiinta ay ku guuleysteen iney gacanta kusoo dhigaan deegaanno dhowr ah oo katirsan gobolka Takhaar, kadib dagaal kooban oo ay la galeen ciidamada xukuumadda Kaabul iyo malleeshiyaad maxalli ah oo ka garab dagaalama Shisheeyaha.
Sida uu sheegay Afhayeenku, ciidamada mujaahidiinta oo adeegsanaya taktiik heer sare ah ayaa ku guuleystay iney qarax ku dumiyaan saldhig ciidamada xukuumadda Kaabul ku lahaayeen degmada Khawaaja ee gobolka Takhaar, waxaana goobtaas ku dhintay ciidamo farabadan.
Qaraxa kadib waxay ciidamada Imaarada islaamiga ee Afqaanistaan qaadeen howlgal ballaaran, iyagoona xureeyey inkabadan 10 kontorool oo ay horey ugu sugnaayeen malleeshiyada xukuumadda Kaabul.
29 ruux oo isugu jira askar iyo saraakiil katirsan ciidamada xukuumadda Kaabul ayaa howlgalkan ballaaran ku dileen Mujaahidiinta, iyadoo intaa dheertahay in Mujaahidiintu gacanta ku dhigeen qanaa’im farabadan oo kala duwan.
Dalka Afqaanistaan ayaa waxaa si xiriir ah uga socoda howlgalka Al-mansuuriyah ee golaha shuurada Imaarada Islaamiga ee Afqaanistaan uu ku dhawaaqay sanadkii hore.